Mashura pakati peHarare – Makuhwa.co.zw
Mashura pakati peHarare
MUKADZI anonamata kuchechi yeJohane Masowe yeNguwo Tsvuku Nyenyedzi Nomwe nemusi weChina svondo rino akakonzeresa nyonga-nyonga pakati peguta reHarare apo akaunganidza hungwanda-ngwanda hwezvinhuzvechivanhu sezvinoshandiswa nen’anga nemasvikiro pakati pemigwagwa motokari nevanhu vakatadza kufamba zvakanaka.
Vanhu vaizviendera kumabasa nekudzimwe nzendo vakazongoona firimu remahara apo mukadzi uyu aiunganidza zvinhu zvaisanganisira machira emaretso, mamwewo matema nematsvuku, matehwe, tsvimbo, zvimiti, mireza, machira akanyorwa, makano, mapakatwa nezvimwe zvinotyisa panosangana mugwagwa waSam Mujoma naNkwame Nkrumah.
Motokari dzakatadza kufamba zvakanaka kuchiti vanhu vaimhanyidzana kuda kunoona, vamwe vachitora mifananidzo nemafoni.
Nekuda kwenyonga-nyonga yakakonzereswa nemukadzi uyu, motokari mbiri dzakaguma dzaita tsaona panzvimbo iyi.
Tendai Charuka (48), uyo anoti anobva kwaNechavava, kuBuhera, akange aine mitundu yezvinhu izvi achiti ainge atumwa nezwi raMwari.
Pazvinhu zvake paivawo nenhembe, miseve, nhovo nemiswe yemhuka.
“Zvandinoita ndinotumwa naMwari, ndinogara kuColbrough (muHarare) panhamba 3064. Ndabva kumba ndikaenda kugomo uko ndanga ndichinamata. Ndatumwa nezwi kudenga kuti nguva yakwana, enda unoita zvandakakudzidzisa. Ndakarara ndanzi nyora pajira kuti ‘Africa yotinhira’,” akadaro mhomho yevanhu ichinzwa.
Charuka anoti akafirwa nemurume uye ane mwana mumwe chete.
Anoti akamuka mangwanani emusi uyu ndokuudzwa nemweya kuti aende panosangana mugwagwa waHigh Glen naHin.
Asvika panzvimbo iyi, anoti akazonzi zvakere nemweya aende panosangana mugwagwa waSam Mujoma naNkwame Nkrumah.
Mukadzi uyu anoti haasi muporofita kana n’anga kunyange aiva nezvinhu zvechivanhu izvo anoti ndezve madzitateguru ake.
“Izvozvi ndine chiga chandiri kunamatira, chemvura yaida kuuya ichiuraya vanhu. Zvandinoita zvose ndinoita zvekurotswa sanhasi ndamutswa na4 mangwanani kuti ndizoita izvi,” akadaro.
Akati kuti asvike panzvimbo apa, akatakurwa nemotokari iyo akabhadhara $2.
Aive nevamwe vanhukadzi vaviri vaimutakurira mabhegi avo vakaramba kutaura mazita avo.
Related Topics:Mashura pakati peHarareMasowe yeNguwo Tsvuku Nyenyedzi Nomwe
Akafa achirutsa nyoka mhenyu
Watch : Pastor removes dead rat from man’s belly